ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်း ရှိ ငှားရန် Modern3Bedrooms,Large Garden ,Clean and Tidy,Fairly New House in9Mile,Mayangone Township, လုံးချင်းအိမ် | ShweProperty.com
ငှားရန် - လုံးချင်းအိမ် - Modern3Bedrooms,Large Garden ,Clean and Tidy,Fairly New House in9Mile,Mayangone Township
Modern3Bedrooms,Large Garden ,Clean and Tidy,Fairly New House in9Mile,Mayangone Township
3 Bedrooms (2 Master Bedrooms and 1 Single Rooms). Equipped with quality furniture, Large Garden and Outdoor Space,
Genuine Teak Wood (Real Wood Flooring),Separate Garage, Good Natural Light via Big Windows, Balcony and Back Up Generator.
- Walking Distance to Ocean Super Market
-5min drive to 8 Mile and 10 mins drive to7Mile Junction Parami
-5mins drive to Mindama Road
-5mins drive to Air Port.
Property ID: S-1184098
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Modern3Bedrooms,Large Garden ,Clean and Tidy,Fairly New House in9Mile,Mayangone Township
ma soe Yein Kyaung St
LBRA-693, ပြည်လမ်းတွင် အကျယ်(90x100) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-687, အေ၀မ်းလမ်းတွင် အကျယ်(60x60) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပါရမီရိပ်သာတွင် လုံးချင်းငှားမည်
LBRA-678, 7မိုင် Villa တွင် အကျယ်(9960sqft) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-677, ခ၀ဲခြံအနီးတွင် အကျယ်(30x80) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-674, ၀ိဇ္ဇာလမ်းတွင် အကျယ်(36x80) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-668, ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်းတွင် အကျယ်(100x60) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-659, မောရ၀တီလမ်းတွင် အကျယ်(65x90) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-658, ဦးမောင်မောင်စိုးလမ်းတွင် အကျယ်(50x100) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-656, မြ၀တ်ရည်လမ်းသွယ်တွင် အကျယ်(30x80) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-646, ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်းတွင် အကျယ်(60x120) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-645, ဦးလွန်းမောင်လမ်းတွင် အကျယ်(55x105) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-644, အောင်မင်္ဂလာလမ်းတွင် အကျယ်(70x120) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-639, သီရိမင်္ဂလာလမ်းတွင် အကျယ်(40x50) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
LBRA-624, ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် အကျယ်(0.35ဧက) ရှိ လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားမည်။
ဖုန်းဆက်ရန် 09779933549, 09426767567
Shweproperty ID: S-1184098
Office no: 09779933549, 09426767567